Inona no diso amin’ny fampitahana ara-politika an’i Taiwan amin’i Afghanistan? · Global Voices teny Malagasy
Manely fanekena ho resy tsy miady avy hatrany ny fampitahana
Voadika ny 25 Aogositra 2021 4:36 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, русский, Português, Ελληνικά, Español, English
Tamba-tsary namboarin'i Oiwan Lam.
Taorian'ny fialan'ny tafik'i Etazonia tao Afghanistan sy ny fahazoan'ny Taliban tampoka an'i Kabul, nihazakazaka an-jotra ny Shinoa mpaneho hevitra hanoritsoritra ny fampitahana eo amin'i Taiwan sy i Kabul ao amin'ny media sosialy. Maro ireo nanontany raha mpiara-dia azo ianteherana i Etazonia amin'ny mety ho ezaka ara-miaramila ataon'i Shina ‘hampitambatra’ an'i Taiwan aminy. Saingy nanasongadina anjotra ny sasany fa mahadiso lalankevitra ny fampitahana.
Fanjakana nizaka tena i Taiwan rehefa nandositra ny kaontinanta ny antoko nitondra tao amin'i Repoblikan'i Shina (ROC), ny Kuomintang, izay fantatra ihany koa ho Antoko Nasionaly Shina, noho ny fahareseny nandritra ny ady an-trano shinoa tamin'ny taona 1949. Na dia mizaka tena aza i Taiwan, efa hatry ny ela ny Repoblika Entim-Bahoakan'i Shina (PRC), eo ambany fitarihan'ny Antoko Komonista Shinoa (CCP na AKS), no nanandratra ny ‘Politikan'i Shina Tokana‘ izay mametraka fa faritra tsy azo vakivakiana ao amin'i Shina tokana i Taiwan sy i Shina Tanibe. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izao i Shina no mitazona fa tsy hampanjaka ny bemidina ara-miaramila hamptambatra azy amin'i Taiwan.
Mba hijoroana manoloana ny tsindry ara-politika ataon'i Beijing, niezaka nanakatra firenenkafa ny filohan'i Taiwan, Tsai Ing-wen, hananganana fiaraha-mizotra ara-diplaomatika, ka i Etazonia no mpiara-dia aminy lehibe indrindra. Manjavozavo be ihany sady anaty paikady ihany koa izany ny politikan'i Etazonia manoloana an'i Taiwan hatramin'ny taona 1979. Na izany aza, nataon'ny fitantanan'ny Filohan'i Etazonia teo aloha Donald Trump nihagoragora kokoa ny fameperana ara-ofisialy amin'ny fifandraisan'i Etazonia sy i Taiwan. Tao anatin'ny roa taona izao, nataon'i Etazonia nanavatsava ny andilan-dranomasin'i Taiwan ny sambompiadiny ary vao haingana no nisy voromby mpiady an'i Etazonia nitody tao Taipei, izay iheveran'ny maro fa marika izany fa tian'i Etazonia hohamafisina ny fifandraisany ara-diplaomatika amin'i Taiwan.
Manoloana ny toe-javamisy, niteraka tebiteby tao Taiwan ireo tsikera amin'ilay fialana mikorontandrotana nataon'ny andia-tafik'i Etazonia avy ao Afghanistan, satria maro ireo manontany hoe mbola afa-miaro sy manohana ny mpiara-dia aminy ihany ve i Etazonia.
Anisan'ireo voalohany tao amin'ny Facebook tamin'ny 15 aogositra nanao fampitahana amin'i Taiwan sy i Afghanistan ilay politisiana iray mpanohana ny fampitambarana amin'i Shina sady Sekretera Jeneralin'ny Broadcasting Corp of China Jaw Shaw-kong hihaikàna ny fiaraha-mizotra ara-diplamotatikan'i Tsai amin'i Etazonia:
Eto Taiwan, vitsy dia vitsy no mifantoka amin'ny hoavin'i Afghanistan. Eo ambany politika tsy ahafaha-mihetsika ataon'ny antoko demaokraty liampandrosoana, tsy mahalala ny ankamaroan'ny eto Taiwan fa mety hitranga eto ny nitranga tao Afghanistan. […] Tsy azo tsinjovina ny mety ho ataon'ny CCP=AKS, tsy azo itokisana i Etazonia, tsy maintsy miantehitra amin'ny tenantsika ihany isika. Safidy tsara ny fandriampahalemana fa tsy ny ady. Raha misafidy ny ady isika, dia mila miomana amin'izany. Saingy tsara omana ho amin'izany ve i Taiwan? Raha tsy tian'i Taiwan ny ho toa an'i Afghanistan, mila mieritreritra lalina isika amin'ny safidy ny fandriampahalemana sy ny ady. Ahoana ny hampijoroana ny fandriampahalemana? Ahoana no fiady amin'ny ady? Tsy afa-miantona amin'ny fiarovan'i Etazonia tsotra izao isika ka hanaterna fa tsy hisy na inona na inona hanjo antsika mandrakizay…
Avy eo izy nanosika an'i Tsai momba ny fiomanan'i Taiwan amin'ny lafiny miaramila ao amin'ny ranty Facebook hafa ny ampitso:
Raha mitady ady i Tsai, mila mamerina ny tsy maintsy hanaovana fitsarana miaramila izy (manao raharaha miaramila) […], mamadika ny sivily rehetra ho miaramila ary mamatsy an'i Taiwan amin'ny fitaovam-piadiana maoderina be. Na ahoana no ahafahantsika manohitra an'i Shina? Te-hanontany an'i Tsai Ing-wen aho, raha miatrika toe-javamisy tahaka ny ao Afghanistan ianao, hisafidy ny hiady hatramin'ny farany ianao sa handray sidina dia handositra mba tsy hiatrehan'ny sivily ady?
Niely haingana tao amin'ny Facebook sy Weibo ny fijerin'i Jaw, ary tao anatin'ny andro vitsivitsy dia nanana ny lanjany teo amin'ny fampitahana. Ohatra, niteny ny politisiana Taiwaney Lei Chien, ‘Tsy zava-dehibe kokoa noho i Afghanistan i Taiwan,’ izay te-hametraka fa handao an'i Taiwan i Etazonia raha manao fanafihana ara-miaramila i Taiwan. Manam-panontaniana amin'ny fahavononan'i Amerika hanohana an'i Taiwan hatramin'ny farany ny mpampianatra ambony amin'ny fifandraisana iraisampirenena raha misy ny fahafihana avy amin'i Shina.
Ho setrin'ny adihevitra, nailiky ny praiminisitr'i Taiwan Su Tseng-chang ny fampitahana ary nofelahany an-teny i Jaw amin'ny ‘fanangezàna ny fahavalo':
Nandalo fanapahana tsirefesimandidy i Taiwan teo ambany fitarihan'ny KMT. Nandritra ny lalàna an'ady (miaramila), tsy natahotra isika ny hogadraina na hotapahin-doha ary niady ny lalantsika ho amin'ny demaokrasia. Ankehitriny i Shina mandrahona ny hanòvana (hanjanaka) an'i Taiwan. Tahaka izany ihany, tsy matahotra isika ny hogadraina na hotapahin-doha, mila manohana ny tanindrazantsika sy ny tanintsika isika. Tsy tahaka ireo izay manao hatrany izay hahangeza ny fahavalontsika sy mampiely fihetseham-po manaiky resy avy hatrany.
Any Shina Tanibe, ampiasain'ny gazety tantanin'ny fanjakana Global Times ho fampitandremana an'i Taiwan ny fampitahana nataon'i Jaw:
Anaovan'ny Global Times ao Shina fampitandremana i Taiwan fa hilaozan'i Etazonia, tahaka ny nataony tao Afghanistan, “vao vaky ny ady” (fa tsy hoe “raha”). “Hirodana ao anatin'ny ora vitsy ny fiarovan'ny nosy ary tsy ho avy hanampy i Etazonia”.
Nozimbazimbain'ny Global Times avy eo ny fitokisana an'i Etazonie eo amin'ny fidirana an-tsehatra ara-miaramila andafindranomasina:
Inona moa no ho ataon'ny maro fa tsy hahatsiahy ny niafaran'ny Ady tao Vietnam tamin'ny taona 1975: nilaozan'i Etazonia ny mpiara-dia taminy tao Vietnam atsimo; babo i Saigon, avy eo saika nampandosirin'i Etazonia avokoa ny olompireneny rehetra tao Saigon. Ary tamin'ny taona 2019, nilaozan'ny andia-tafik'i Etazonia tampoka i Syria avaratra ary nilaozany ny Kiorda mpiara-dia taminy.
Saingy nasain‘i Wang Hao, ampanoratra Taiwaney eo amin'ny raharaha iraisampirenena, ny hafa hamaky ny vaovao avy amin'ny fomba fijery hafa:
Maro ireo olona miresaka ny fandaozan'i Etazonia an'i Shina tamin'ny taona 1949, nandaozany an'i Vietnam tamin'ny taona 1975, ary ny nandaozany an'i Afghanistan tamin'ny taona 2021. Saingy tamin'ny taona 1949, tsy tsinjon'i Staline ny fisarahan'i Shina amin'i URSS 10 taona taoriana; tamin'ny taona 1975, tsy tsinjon'i Mao Zedong ny ady Sino-Vietnamiana efa-taona taty aoriana; inona ny tsy voatsinjon'i Xi Jinping mialoha (izao) taona 2021 (izao)?
Notoherin'i Melissa Chan, mpanao gazety mahaleotena, ilay fampitahana ara-politika avy amin'ny fijery noraisina tamin'ny mpampianatra lalàna Donald Clarke sy tamin'ny manampahaizana manokana amin'ny fifandraisana amin'ny vahiny Andrew Small:
… tamin'ny resadresaka nifanaovako tamin'i @ajwsmall (handranty tsy ho ela!), notondroiny ihany koa fa mety ho tian'ny manana hery eto Azia ihany koa ny fialàn'i Etazonia satria midika izany fa afa-mifantoka indray amin'ny filaminana eto Indo-Pasifika.
Ny zava-dehibe kokoa, araka ny atondron'ny mpanao gazety Taiwaney sasantsasany, tena mandiso lalana tokoa ny fampitahana satria toa mametraka izany fa mbola manana andia-tafika eto Taiwan i Etazonia. Ny marina anefa — efa nanaisotra ny andia-tafiny rehetra hiala an'i Taiwan i Etazonia tamin'ny taona 1979, nefa mbola afa-mijoro mahaleotena ny firenena mandraka androany.